China DL-Methionine CAS 59-51-8 ho an'ny mpamokatra sy mpamatsy Grade Food (FCC / AJI / UPS / EP) | Honray
Anaran'ny vokatra ：: DL-Methionine
DL – methionine (Ab Shortated Met) dia iray amin'ireo asidra amine 18 iraisana, ary iray amin'ireo asidra amine tena ilaina valo ao amin'ny vatan'ny biby sy ny vatan'olombelona. Ampiasaina ho toy ny additives fahana amin'ny trondro, akoho, kisoa ary omby izany mba hitomboan'ny biby sy ny vorona ara-pahasalamana. Izy io dia afaka manatsara ny tsiambaratelon'ny omby amin'ny omby, manakana ny fisian'ny hépatose. Ankoatr'izay, azo ampiasaina ho fanafody asidra amine, vahaolana fanindronana, fampidirana sakafo mahavelona, ​​mpiasan'ny atiny miaro, cirrhosis amin'ny atiny ary hépatite poizina.
Ny DL-methionine dia azo ampiasaina amin'ny fampifangaroana vitamina fanafody, famenon-tsakafo ary famenon-tsakafo.
DL-methionine dia iray amin'ireo singa fototra mampiditra ny asidra amino ary ny asidra amine amnoma. Ny DL-methionine dia misy fiasan'ny aty miady amin'ny tavy. Manararaotra an'io fiasa io, ny vitamina vitamina synthetic dia azo ampiasaina ho fanomanana fiarovana ny aty.
Amin'ny maha asidra amine tena ilaina ny vatan'olombelona, ​​ny DL-methionine dia azo ampiasaina ho famenon-tsakafo amin'ny sakafo sy ny fanodinana preservative toy ny vokatra mofomamy trondro.
Raha ampiana amin'ny sakafom-biby, DL-methionine dia afaka manampy ny biby hitombo haingana ao anatin'ny fotoana fohy ary manodidina ny 40% ny sakafony dia azo vonjena.
Amin'ny maha singa iray manan-danja amin'ny fampidirana proteinina, ny DL-methionine dia misy fiantraikany miaro amin'ny hozatry ny fo. Mandritra izany fotoana izany, ny DL-methionine dia azo avadika ho Taurine amin'ny solifara, raha Taurine kosa dia misy vokany miharihary miharihary. Ny DL-methionine koa dia manana fiasa tsara ho an'ny fiarovana sy fanesorana ny atiny, noho izany dia matetika ampiasaina amin'ny fitsaboana klinika ny aretin'aty toy ny cirrhosis, aty matavy ary hépatite virtoaly mahery vaika sy mitaiza. Misy vokany tena tsara.
Amin'izao fiainana izao, DL-methionine dia be sakafo toy ny voana tanamasoandro, vokatra vita amin'ny ronono, masirasira ary ahidrano an-dranomasina.
mazava & tsy misy loko
Previous: L-Tryptophan CAS 73-22-3 Ho an'ny kilasy famahanana
Manaraka: L-Isoleucine CAS 73-32-5 ho an'ny sokajy sakafo (AJI USP EP)
L-Valine 72-18-4, 73-32-5 L-Isoleucine, Kilasy Sakafo L-Threonine, Farm kilasy L-Leucine, L-Threonine Pharm, Sakafo biby,